Valve inogona kunge ichishanda pane nyowani vhezheni yeiyo Steam Controller | Linux Vakapindwa muropa
Dzimwe nhepfenyuro dzeChirungu dziri kufungidzira uye runyerekupe pamwe nekukwanisika kugadzirisa kweanozivikanwa Valve mutungamiriri. Uye kambani inogona kunge ichishanda pane wechipiri vhezheni yekuvandudza yako Steam Controller. Chizvarwa chechipiri cherudzi urwu rwevatongi chinogona kufadza vatambi vazhinji. Muzuva rayo, vazhinji vakaona iyo nyowani yemavhidhiyo mutambo wevatongi seyakavanzika, kunyangwe yakashoropodzwa nemamwe matunhu.
Pamwe iyo nyowani yekuvandudza yaizounza kumwe kugadziridzwa kwenguva nyowani dzemitambo. Kana runyerekupe, sezvo rwusati rwasimbiswa, chiri chechokwadi, pasina kupokana zvichave zvinonakidza kuziva hunhu hweSteam Controller. Uye kana iwe uchinetseka nezve hwaro hwerunyerekupe urwu, chokwadi ndechekuti zvinobva paPCGamesN yepakati, iyo ichangoburitsa vhidhiyo pane yayo YouTube chiteshi inonzi Critical Input. Muvhidhiyo zvinoita sekunge kunyoreswa kwepatent kwakaitwa Zvita apfuura.
Rekodhi yacho yaibva pane chishandiso chine dhizaini yakatosiyana yemabhatiri uye zvimwe zvitsva. Muchi bvumidzwa mune zvakare kutaurwa kwesimba-risingapikisi anopikisa, ayo anounza kupokana zvinoenderana nedzvinyiriro raunoisa pachiuno. Mushure memwedzi mishoma yeizvozvo, zvinokwanisika kuti Valve yatove neiri yepamusoro uye kuti inogona kunge ichizoshandisa mukutanga bvunzo.
Kunyangwe isina kusimbiswa, zvinoita sezviri pachena kuti chimwe chigadzirwa chavari kufunga nezvekutanga. Rangarira kuti zvinyorwa zvepatent zvinowanzova nzvimbo yakanaka yekuona mafambiro evagadziri pamberi. Zvichida zvakare zvine hukama nechero yavo chaiyo masisitimu? Hatizive, parizvino vari makuhwa chete. Asi kana pachinge paine chimwe chinhu chakajeka, isu tinozotaura nezvazvo pano muLxA uye ndinovimba ichave ichakurumidza. Zvakare, zvirokwazvo Steam Mutongi 2? ichave inoenderana neLinux.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Valve inogona kunge ichishanda pane nyowani vhezheni yeSteam Controller